I-Moroccan Retreat- Hamba uye Ebhishi & Amahhotela Aphakeme - I-Airbnb
I-Moroccan Retreat- Hamba uye Ebhishi & Amahhotela Aphakeme
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Amanda & Mike
U-Amanda & Mike Ungumbungazi ovelele
Mhlawumbe Igumbi eliyingqayizivele kunazo zonke endaweni yethu. Igumbi lokugezela liyingxenye emangalisayo yaleli gumbi ongayithokozela endaweni yokubalekela yokhuni yesitayela se-Spa. I-Modern World iyisakhiwo se-boutique enamakamelo angu-8 futhi igumbi ngalinye linomuzwa ohlukile kanye nomklamo ozowujabulela. I-king size bed ehlanganiswe nomatilasi we-pillow top izokusiza ukuthi uphumule futhi uthole ubuthongo obuhle.
Amathawula olwandle kanye nezihlalo zasolwandle zinikezwe endaweni.
I-Moroccan Retreat iyifulethi likanokusho futhi ilungele abantu abangu-2. Ngomoya wayo omibalabala, waseMoroccan futhi ophumuzayo, ungathola ukuzola okuphelele lapha. Baleka indlela yansuku zonke futhi ungene endaweni enemibala ye-Moroccan Retreat.
Inikeza indawo yokugezela enkulu, enesitayela se-spa, eneshawa.
I-Moroccan Retreat ine-air-conditioning futhi inikeza:
Indawo yokulala neyokuhlala enefriji kanye ne-coffeemaker.
• Igumbi lokulala elinombhede olingana nohlobo
• I-TV yesibuko esiyisicaba
• Isiqandisi kanye ne-coffeemaker
Sinekhishi langaphandle elinezindawo zokupheka kanye ne-grill lapho ungenza khona isidlo sasekuseni noma isidlo sakusihlwa.
Endaweni yokwamukela izivakashi uzothola itafula lapho ungafunda khona incwadi noma udlale umdlalo, futhi kukhona umenzi weqhwa.
Izingane ezineminyaka engu-12 noma ngaphezulu zamukelekile.
I-Modern World Aruba itholakala (maqondana ngqo ne-Marriott Hotel & Casino) emizuzwini emi-3 kuphela ukusuka ePalm Beach nase-High Rise Area enenxanxathela yezitolo, indawo yokudlela, amabha kanye nekhasino. Kunesitobhi sebhasi esisendaweni eyimizuzu emi-3 yokuhamba ngezinyawo. lighthouse 1,5 miles, dive indawo 4 min ukuhamba.
Ibungazwe ngu-Amanda & Mike
Siyatholakala ukuze senze ukubhuka kwezimoto nezindawo zokudlela noma nje ukuncoma izindawo.
UAmanda & Mike Ungumbungazi ovelele